Qatar Airways: Sannad buuxa oo dabacsanaan ah 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways: Sannad buuxa oo dabacsanaan ah 2021
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday inay u fidin doonto rakaabka wax ka bedelka taariikhda aan xadidneyn iyo lacag celin lacag la’aan ah dhamaan tikidhada la bixiyay ka hor 30-ka Abriil 2021 ee safarka oo la soo gabagabeeyay 31-ka Diseembar 2021. Waxyaabihii ugu dambeeyay ee shirkadda ay ku kordhisay siyaasadeeda tigidhada jajaban ee warshadaha ayaa loogu talagalay inay sii wado bixinta macaamiisha iyagoo leh xasillooni maskaxeed oo ay si fudud ugu beddeli karaan qorshayaashooda.
Shirkada diyaaraduhu waxay kaloo samaynaysaa ikhtiyaarka ah inay tikidhada ku beddelaan foojarka safarka oo leh 10% qiime dheeri ah oo ah muuqaal joogto ah dhammaan macaamiisha tikidhada safarka ku maraya qatarairways.com Nidaamka dib u bixinta foojarka safarka waa mid deg deg ah oo sahlan - rakaabku waxay ka codsadaan khadka tooska ah waxayna ku helayaan foojarka 48 saacadood gudahood.
Madaxa Fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Intii lagu gudajiray 2020, waxaan siinay macaamiisha awood ay ku beddelaan safarka iyada oo aan la ciqaabin sababo la xiriira carqaladeynta safarka adduunka ee ay sababtay COVID-19. Waxaan rajeyneynaa fursadaha safarka mar kale sanadka soo socda, Qatar Airways waxay sii joogi doontaa dhinaca rakaabka, iyadoo bixinaysa dabacsanaan joogta ah sanadka 2021 oo dhan maadaama ay tahay diyaaradda ay ku tiirsanaan karaan.
Shirkadda diyaaradaha ee Qatar ayaa sii wadata dib u dhiska shabakadeeda, taas oo hadda taagan in ka badan 100 meelood oo u sii kordheysa 126 illaa Maarso 2021. Iyada oo ay ku soo kordhayaan mowjado badan xarumaha muhiimka ah, Qatar Airways waxay siisaa xiriir aan lala tartami karin oo rakaabka ah, taas oo u sahlaysa iyaga. inay beddelaan taariikhada safarkooda ama halka ay tagayaan haddii ay u baahdaan. Qatar Airways sidoo kale waxay weli ka go’an tahay inay ixtiraamto soo celinta rakaabka, iyadoo bixisay in ka badan $ 1.65 bilyan oo doolar tan iyo bishii Maarso 2020.
Markaad la safreyso Qatar Airways sannadka 2021, rakaabku waxay filan karaan heerarka ugu sarreeya ee nabadgelyada inta ay ku jiraan safarkooda. Tallaabooyinka badqabka ee diyaaradda waxaa ka mid ah bixinta qalab ilaalin shaqsiyeed (PPE) oo loogu talo galay shaqaalaha qolka iyo xirmada ilaalinta ee bogaadin iyo gaashaammada wejiga la tuuro ee rakaabka.
Rakaabka Heerka Ganacsiga ee diyaaradda ku qalabeysan ee loo yaqaan 'Qsuite' ayaa ku raaxeysan kara asturnaanta kor loo qaaday ee kursi abaalmarintan abaal-marinta ah ay bixiso, oo ay ku jiraan kala-goysyada khaaska ah ee qarsoodiga ah iyo ikhtiyaarka ah in la isticmaalo tilmaame 'Ha Dhibin' (DND) Qsuite waxaa laga helaa duulimaadyada in ka badan 30 meelood oo ay ku jiraan Frankfurt, Kuala Lumpur, London iyo New York.
Barnaamijka Guam ee Air V&V oo diyaar u ah duulimaad